आजबाट मलमास सुरु, मलमासमा के गर्ने के नगर्ने ? - २ आश्विन २०७७, NepalTimes
आजबाट मलमास सुरु, मलमासमा के गर्ने के नगर्ने ?
२ असोज, काठमाडौँ ।
मलमास वाअधिकमास आजबाट सुरु भएको छ । प्रत्येक ३२ महिना १६ दिन १ घण्टा ३६ मिनेटमाआउने मलमास वा अधिकमास आजबाट सुरु भएको हो । आजबाट सुरु भएको मलमास आगामी असाज २० गते शुक्रबारसम्म रहने नेपालपञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
३६५ दिनलाई एक वर्ष मान्दावर्षमा सौर र चन्द्रमास हुन्छन् । दुबैलाई समन्वयगर्न ३२ महिना १६ दिन १ घण्टा ३६ मिनेटमा मलमास वाअधिकमास आउने नेपालपञ्चाङ्ग निर्णायक समितिकापूर्व अध्यक्षप्रा.डा. माधव प्रसाद भट्टराईले बताए ।
एउटा औँसीदेखि अर्को औँसीसम्म सङ्क्रान्ति छैन भने त्यो महिनालाई मलमास वाअधिकमास भनिन्छ । महिनामादुई वटा सङ्क्रान्तिप¥यो भने क्षयमास भनिन्छ । क्षयमास भने कहिले कहिले मात्रहुने गरेको छ । क्षयमास कात्तिक, मङ्सिर र पुसमा पर्ने गरेको छ । मलमास अर्थात् अधिकमासमा नित्यकर्म पूजा, पाठ, जप, ध्यान गर्नुहुन्छ ।
पहिल्यैदेखि गर्दै आएको व्रतलाई नियमितता दिनहुने तर नयाँव्रतको शुरुवात् गर्नु नहुने नियम रहेको प्रा.डा. भट्टराईले बताए । मलमासको समयमा महादान, माङ्गलिककार्य अर्थात् विवाह, व्रतबन्ध, गृह निर्माण, गृहप्रवेश जस्ता कार्य गर्नु हुँदैन । यसैगरी गर्भाधान गर्नुहुँदैन, पहिले नै गर्भ रहेको भए दोष लाग्दैन ।